Base Station poolu, Mobile poolu, Abụọ Way Radio mpi - ShengDa
Quality bụ a criterion, àgwà bụ a iguzosi ike n'ihe, àgwà dị a ọrụ, àgwà dị ndụ nke enterprise. Enweghị àgwà, iguzosi ike n'ezi na ahịa, ihe enterprise tụfuru ya ike na-adị ndụ. SHENGDA Na mbụ na klas na ngwaahịa, ndị magburu onwe ọrụ, ngwa ngwa nnyefe na nke kacha mma price, anyị merie ukwuu eto mba ọzọ ahịa '.
SHENGDA nwere a-eto eto na otutu management talent. Site irè nkwurịta okwu na tacit imekọ ihe ọnụ n'etiti ngalaba dị iche iche, kwa afọ arụpụtaghị arụmọrụ nke ụlọ ọrụ a budata mma. Ọzụzụ nke talent e kpọrọ oké ihe, nke na-enye a siri ike nkwa maka SHENGDA.
Site na òkè nke ụlọ ọrụ elites, anyị pụrụ ime quality, belata mkpokọta na-eri na-ebelata iji ẹkụre oge, na-agbalịsi ike imeta-aga n'ihu mma results, na-eme ka SHENGDA a ike osompi na zuru ụwa ọnụ ahịa. Ahịa itinye oké mkpa ka anyị na ike ịzụlite otutu imewe na elu mmepụta ike, mgbe nzute kpọmkwem àgwà ụkpụrụ na omume ọsọ.
Ugbu a, anyị na-agbalị ike ọhụrụ ahịa, eke a dị mfe, dị ọnụ ala karịa na oké obi ụtọ nke na-azụ ahịa. SHENGDA nwere ahụmahụ otu na ike izute kpọmkwem ngwaahịa mkpa n'oge ọ bụla. The uru anyị na ike abụghị nanị inye antennas, kama ịgbanwe antennas n'ime gị kpọmkwem mkpa.
Gps Marine Antenna, 915mhz mpi, Wifi Antenna, Yagi mpi,